२ questions प्रश्नहरू सोध्नु अघि तपाईंले नयाँ जीवन शुरू गर्न सबै छोड्नुहोस् - ब्लग
२ Questions प्रश्नहरू सोध्नु अघि तपाईंले नयाँ जीवन सुरु गर्न पछाडि सबै छोड्नुहोस्
त्यसोभए, तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि यो तपाइँको जीवनको नयाँ अध्याय सुरू गर्न समय आउन सक्छ, वा हुनसक्छ पूर्ण नयाँ पुस्तक पनि।
तपाईले आफूले जानेका सबै चीजलाई पछाडि छोड्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण नयाँ जीवन सुरु गर्नुहोस् कतै बिभिन्न भिन्न।
तपाईं नयाँ शहरमा जानको लागि सोच्दै हुनुहुन्छ, वा हुनसक्छ पूर्ण नयाँ देशमा पनि।
तपाईंले स्थापित जीवन पाउनुभयो जहाँ तपाईं अहिले हुनुहुन्छ, तर केहि तपाईंलाई धक्का दिन्छ वा तान्नको लागि लेप लिनको लागि र सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनलाई सम्भव बनाउनुहोस्।
होईन, यो हल्का लिने निर्णय होईन।
यो एक निर्णय हो जुन तपाईंको जीवनलाई यहींबाट लिन्छ सम्पूर्ण पाठ्यक्रममा ठूलो फरक पार्छ।
र त्यो आश्चर्यजनक रमाईलो छ, तर यो भारी को लागी पनि हुन सक्छ।
यदि तपाइँ कामको सही मार्गमा गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ र गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ, वा तपाइँ निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाइँले सही निर्णय लिनु भएको छ तर केवल तपाइँ समझदार हुनुहुन्छ भनेर निश्चित गर्न चाहानुहुन्छ, त्यसो भए यो समय आत्मा खोजीको लागि समय हो।
तपाईंले आफैलाई ठूला प्रश्नहरू सोध्नु पर्छ, र आफैलाई केहि दिनुहोस् इमान्दार उत्तरहरु
जे भए पनि, नयाँ सुरूवात आश्चर्यजनक हुन सक्छ, तर यो पार्कमा कहिल्यै हिड्दैन। तपाईंले चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ।
त्यहाँ प्रश्नहरू छन् जुन तपाईंले आफैलाई सोध्नुपर्दछ यो डुबकी लिनु अघि, र सबैको प्राथमिकताहरू फरक हुनेछ।
यहाँ केहि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन् जुन तपाईंलाई वास्तवमै के चाहिन्छ भनेर स्पष्ट हुन मद्दत गर्दछ, र यसले सबै कसरी व्यावहारिक र भावनात्मक स्तरमा काम गर्दछ ताकि तपाईं स्टोरमा भएका चीजहरूको लागि तयार हुनुहुन्छ।
१. तपाईलाई के धकेल्दै छ?
यो के हो जुन तपाईं अहिले आफुसँग खुसी हुनुहुन्न?
मानिसहरू? रोजगारका अवसरहरू? जीवनशैली? मौसम?
के तपाईको हालको घरको बारेमा केहि यस्तो छ जुन आदर्श छैन, वा तपाईलाई सक्रिय रुपमा छाडिन धकेलीरहेछ?
एक मायालु को मृत्यु को लागी कविताहरु
यो महत्त्वपूर्ण छ तपाइँको समस्याबाट भाग्न को लागी छैन , किनभने यदि तपाईंले समाधान नगरिकन नै चीजहरू छोड्नुभयो भने, तिनीहरू जहाँ-जहाँ जानुहुन्छ तपाईंलाई पछ्याउन सक्दछन्।
२ के तपाईंलाई तान्दै छ?
के त्यहाँ दिमागमा रहेको स्थानको बारेमा केहि छ जुन तपाईलाई त्यहाँ खिच्दै छ?
जे होस् तपाईले नक्सामा भर्खरै एउटा पिन राख्नु भएको हुन सक्छ, र केहि व्यक्तिले मुड लिने बित्तिकै सर्छन्, यो सायद तपाईले गर्नु भएको अनियमित निर्णय होईन।
तपाईंले यो गरिरहनु भएको एक कारण छ, र यो कारण, सम्पूर्ण विस्तृत संसार तपाईंको लागि उपलब्ध छ, तपाईंले त्यो विशेष ठाउँ रोज्नु भएको छ।
तपाईं कामका लागि सर्दै हुनुहुन्छ, वा तपाईं महत्वपूर्ण अन्यको लागि सर्दै हुनुहुन्छ।
यदि त्यो केस हो भने, आफैलाई सोध्नुहोस् कि के तपाईंले कहिल्यै प्रश्नको ठाउँमा जाने विचार गर्नुभएको थियो कि यदि त्यो एक खास कुराले तपाईंलाई त्यहाँ तान्दै गरेको थिएन भने।
यदि त्यहाँ अन्य कारणहरू छन् जुन तपाईं बढ्दै जानु भएको छ भने, यसले सपनाको काम वा सम्बन्धबाट केही दबाब लिन मद्दत गर्दछ, जो अन्यथा तपाईंको अपेक्षाहरू अनुरूप जीवन बिताउन संघर्ष गर्न सक्छ।
कसरी एक सम्बन्ध मा अधिक मायालु हुन
You. तपाई त्यहाँ बस्नु भएको देख्न सक्नुहुन्छ?
तपाईको दिमागमा के तपाई आफैले त्यहाँ बस्न पाउनुहुन्छ?
तपाईको घर कस्तो देखिन्छ र तपाईको साताको अन्तीमा के गर्नुहुन्छ भनेर तपाई चित्र बनाउन सक्नुहुन्छ?
जब तपाईं यो कल्पना गर्नुहुन्छ, के यो वास्तविक र मूर्त देखिन्छ, वा तपाईं आफैं त्यहाँ चित्रण गर्न संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ?
What. तपाईलाई पछाडि के छ?
यसको जवाफ 'केहि पनि होइन' हुन सक्छ, तर यदि तपाइँ यसलाई पढिरहनुभएको छ भने तपाइँ सायद अझै विश्वस्त हुनुहुन्न कि सबै कुरा छोड्नु तपाइँको लागि कार्यको सही मार्ग हो ...
… र त्यो हुन सक्छ किनभने त्यहाँ कोही छ वा तपाईंलाई पक्रिरहेको छ।
त्यो के हो भन्ने बारे आफैंसँग इमानदार हुनुहोस्, र यसमा विचार गर्नुहोस् कि तपाईं यसलाई आफ्नो जीवन आदेश दिन दिन इच्छुक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न।
How. तपाईले यस बारे कहिले सपना हेर्दै हुनुहुन्छ?
केहि स्वतन्त्र आत्मा रातारात निर्णय लिनुहोस्, र त्यो जीवन बाँच्नको उत्तम तरिका हुन सक्छ यदि तपाईं सम्भावित परिणामहरू सामना गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने।
जे होस्, यदि तपाईं अधिक हेरचाह गर्नुहुन्छ पूर्ण हेरचाह भन्दा सित्तैमा , सोच्नुहोस् तपाईले यस बारे कहिले सपनामा हेर्दै हुनुहुन्छ।
के यो केवल एक सनक हो कि तपाइँ फेरि केहि हप्तामा बिर्सनुभयो, वा यो केहि वर्षहरु को लागी बुडिंग को लागी गरीरहेको छ, कि तपाइँ अन्ततः मा काम गर्ने मौका मिल्यो?
How. तपाईं कसरी आफ्नो नयाँ जीवन वित्त गर्नेछ?
तपाईं विशेष रूपमा यो चाल बनाउँदै हुनुहुन्छ किनभने एउटा कामको र चीजहरूको वित्तीय पक्षको बारेमा धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन।
तर यदि तपाईं हुनुहुन्न भने, यो तपाईंको प्राथमिक चिन्ताको विषय हुनेछ।
के तपाईसँग बचत भएको छ जब तपाई लाई काम पाउन को लागी केहि समय लाग्छ भने?
के तपाईं केहि समयको लागि बचतमा जीवन बिताउने योजना बनाइरहनुभएको छ, र राम्ररी आर्जित ब्रेक लिदै हुनुहुन्छ?
के तपाइँसँग त्यहाँ रोजगार बजार कस्तो छ को एक विचार छ?
के तपाईंको योग्यता मान्य हुनेछ?
तपाइँ कसरी काम खोज्ने बारेमा जान सक्नुहुन्छ?
के तपाईसँग आवश्यक भाषा सीप छ?
Your. तपाईको क्यारियर समृद्धि हुनेछ? के यो तपाईको लागि महत्वपूर्ण छ?
यदि तपाईंको क्यारियर अहिले तपाईंको लागि प्राथमिकता हो भने, के यो लामो अवधिमा राम्रो चाल हो, वा चिन्तित हुनुहुन्छ कि तपाईं पछुताउन सक्नुहुन्छ?
वा, एक ठोस क्यारियर रहेको छ जुन तपाईं हाल तपाईंको कम मा प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ प्राथमिकताहरूको सूची ?
यो पूर्णतया तपाईंको प्रिग्रेटिभ र एक धेरै मान्य विकल्प हो, किनकि जीवन भन्दा कार्यको भन्दा धेरै छ ...
... तर आफ्नै महत्वाकांक्षाहरूको बारेमा आफैसँग इमानदार हुनुहोस्, र यदि तपाईं त्यो 'क्यारियर भर्या .्ग' मा चढ्न चाहानुहुन्छ भने, यस चालले तपाईंलाई अर्को पट्टीमा मद्दत पुर्‍याइरहेको छ।
If. यदि तपाइँसँग कामको प्रतिक्षा छ भने, यो कत्तिको सुरक्षित छ?
यदि तपाइँ अपपिंग गर्दै हुनुहुन्छ र कामको लागि सर्दै हुनुहुन्छ भने र मात्र कामको लागि, त्यसोभए तपाईंले निश्चित हुन आवश्यक छ कि यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईं भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ।
यो अस्थायी वा स्थायी सम्झौता हो? यदि तपाइँ काम समाप्त भएन भने कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ?
Where। तपाई कहाँ बस्नुहुनेछ? को संग?
के तपाईं एक्लै बस्न चाहानुहुन्छ? यदि हो भने, के तपाईं एक्लो महसुस गर्नुहुनेछ? के तपाईं यो खर्च गर्न सक्षम हुनुहुनेछ?
के तपाईं घर वा सपाट साझेदारी गर्न चाहनुहुन्छ? कसरी तपाईं तल ट्रयाक गर्नुहुन्छ? के तपाईले विकल्पहरू हेर्नु भयो?
तपाईको बस्ने ठाउँबाट तपाईले अपेक्षा गरिरहनु भएको कुराको स्पष्ट विचार हुनु यो महत्वपूर्ण छ, र यदि त्यो यथार्थवादी छ भने।
१० के तपाईसँग आपतकालीन कोष छ?
यदि सबै कुराहरु पेट मा जान्छ भने, तपाईं संग पैसा को एक कुशन छ तपाइँलाई समर्थन गर्न?
हामीमध्ये कोही कोही परिवारको लागि भाग्यशाली छौं कि यदि आवश्यक परेमा हामीलाई जमानत दिन सक्षम हुनेछ, तर हामीमध्ये कोही छैनौं।
धेरै जसो तपाईंको परिवारले तपाईंलाई माया गर्न सक्दछ, उनीहरू आर्थिक स्थितिमा नहुन सक्छ तपाईलाई यसको आवश्यक पर्न सहयोग गर्न।
केन र उपक्रम वास्तविक भाइहरु हुन्
त्यसोभए, तपाईं निश्चित हुनु आवश्यक छ कि तपाईंसँग केही पैसा बचत गरिएको छ जुन तपाईं आपतकालमा फिर्ता खत्तम हुन सक्नुहुन्छ।
११. तपाईंको भावी नयाँ घरमा जस्तो बस्नको लागत के हो?
के तपाईंको हाल बस्ने ठाउँमा भन्दा बस्नको लागत उच्च वा कम छ? के तपाईं यो खर्च गर्न सक्षम हुनुहुनेछ?
साधारणतया भाडाका मूल्यहरू के हुन्? तपाईं अब भन्दा कम पैसा बचत गर्न सक्षम हुनेछ, वा कम?
बाहिर खाँदा कस्तो खर्च आउँछ, र यात्रा कति महँगो छ?
के तपाईले हप्तामा कति पटक खानुहुन्छ त्यसको संख्या घटाउनुपर्नेछ, वा तपाईले आफ्नो पर्सको तारा अलिकति ढिलो गर्न सक्नुहुनेछ?
तपाइँको लागि बाहिर निकाल्न र को लागी र समाजियरण गर्न कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ?
१२. के त्यहाँ कुनै भिसा प्रतिबन्ध छ?
यो बोरिंग पार्ट हो।
धेरै जसो हामी सबैलाई केवल यस सुन्दर ग्रहको चारै तिर नि: शुल्क घुम्न सक्षम हुन मन पर्छ, सीमा र भिसा दुर्भाग्यवस अझै पनि धेरै चीज नै हो।
यदि तपाईं विदेश जानुहुन्छ भने, के तपाईं प्रश्नमा रहेको देशको लागि भिसा लिन सक्षम हुनुहुनेछ?
त्यो भिसाले तपाईंलाई त्यहाँ बस्नको लागि कहिलेसम्म अनुमति दिन्छ? के तपाईं चाहानुहुन्छ भने लामो अवधिमा रहन सक्नुहुनेछ?
१care. स्वास्थ्य सेवा संग के सम्झौता छ?
कोही पनि अमर हुँदैन, त्यसैले तपाईं कतै जानुभन्दा पहिले तपाईंको स्वास्थ्यसेवाको बारेमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।
तपाइँको देश जाँदै छ कि देश संग एक पारस्परिक सम्झौता हुन सक्छ, तर तपाईं सामान्यतया यो सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि तपाइँ एक उपयुक्त बीमा नीति पाउनु भयो, कि तपाइँ हुन लाग्नु भएको ठाउँमा र तपाइँ कभर गर्न को लागी कभर। गतिविधिहरू तपाईंले गरिरहनु भएको छ।
तपाईं के पछाडि छोड्दै हुनुहुन्छ?
तपाईको हालको जीवनमा तपाईले गर्नु भएका सबै चीजहरूको बारेमा सोच्नुहोस्, यो तपाईको काम हो, तपाईका साथीहरू, तपाईका परिवार, तपाईको घर वा तपाईको पार्टनर हो कि होइन र आफैलाई सोध्नुहोस् कि तपाई वास्तवमै यी सब त्याग्न इच्छुक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न।
यदि तपाईं यस चरणमा जानुभएको छ भने, उत्तर राम्रो हुन्छ हुन सक्छ, तर तपाईंले पक्का गर्नु पर्दछ कि तपाईंले पछाडि छोड्नु भएकोमा ठ्याक्कै तपाईंलाई थाहा छ।
जे भए पनि, उनीहरूले भनेजस्तो थाहा छैन तपाईले के गर्नुभयो यो थाहा नभए सम्म।
१.. तपाईं टाढा हुँदा तपाईं आफ्नो सामानहरू के गर्नुहुन्छ?
र हामी व्यावहारिकतामा फर्केका छौं!
तपाईं लगभग निश्चित रूपमा यस ग्रह मा तपाईंको समय मा सामान को एक धेरै संचित गर्नुभयो।
तपाईं यो के गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
के तपाइँ यी सबै तपाइँसँगै लिएर हुनुहुन्छ? के तपाइँका सामानहरू भण्डार गर्नको लागि तपाइँका बाबुआमा ठाउँ त्याग गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ? के तपाईं साथीहरूसँग केहि सामान छोड्न सक्नुहुन्छ? के तपाईंले भण्डारणको लागि तिर्नु पर्छ?
र, तपाई वास्तवमै ती सबै भौतिक वस्तुहरूमा कसरी संलग्न हुनुहुन्छ? के तपाईं सबै चीज बेच्न सक्नुहुनेछ जुन सूटकेसमा फिट हुँदैन र केहिमा लिप्त हुन्छ न्यूनतम बस्ने ?
के गर्ने यदि तपाइँको प्रेमिका तिमीलाई झुट बोली
१.. के तपाईसँग धेरै सामानहरू लिन आवश्यक छ? यसको कति खर्च हुन्छ?
यदि तपाईं चलिरहेको लक, स्टक, र ब्यारेलको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, बहु सुटकेसहरू वा फर्नीचरसमेत लिईरहनुभएको छ भने, यी सबै प्राप्त गर्न कति खर्च हुनेछ? यो कसरी तार्किक तरिकाले काम गर्दछ?
के तपाइँसँग ब्याक अप योजना छ?
कल्पना गर्नुहोस् यो सबै अलग हुन्छ।
कल्पना गर्नुहोस् केहि पनि पनी उल्टो छैन जुन तपाईं चाहानुहुन्छ।
अब तिमि के गर्छाै?
तपाईं पुच्छर बारी र घर आउँछ? के तपाईं यससँग टाँसनुहुनेछ र यसलाई काम गर्नुहुनेछ? के तपाइँ दिमागमा अर्को ठूलो योजना छ?
१.. के तपाइँसँग सम्पर्क गर्नको लागि सक्षम हुने ठाउँमा समर्थन नेटवर्क छ?
आधुनिक युगको सौन्दर्य यो हो कि हामी हाम्रो मित्रहरू र परिवारबाट कति टाढा छौं, तिनीहरू केवल फोन वा भिडियो कल मात्र हुन्।
मानिसहरु को हुन् जुन तपाईलाई थाँहा छ कि तपाई भरोसा गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईलाई तिनीहरूको समर्थन चाहिन्छ?
के तपाईं एक्लोपनको सामना गर्नुहुन्छ?
नयाँ कतै सर्नु अविश्वसनीय रमाईलो हुन सक्छ, तर एकाकीपन वास्तविकता हो।
यसले तपाईंलाई आफ्नो खुट्टा फेला पार्न र साथीहरू भेट्टाउन केहि महिना लिन सक्दछ, र ती पहिलो महीनाहरू धेरै एकाकी हुन सक्छन्।
तपाईंले व्यक्तिहरूलाई भेट्नु भएको हुन सक्दछ, तर मित्रता र नयाँ समर्थन नेटवर्क बनाउन यसले तपाईंलाई केही समय लिन सक्दछ, यसको मतलब यो हुन्छ कि तपाईंले आफ्नै समयमा धेरै समय खर्च गर्नु हुनेछ।
के तिमी एकाकीपनको सामना गर्नुहोस् राम्रो?
यो अनुभव गर्न सजिलो छैन, तर केहि व्यक्तिहरू अधिक स्वाभाविक र अरू भन्दा आत्म-निर्भर छन्।
तपाईं एक्लो रहन संघर्ष गर्नु स्वीकार्नु छला take्ग लिनुको कारण होइन, तर सुरुका केही महिना थोरै मोटा र कडा हुने अपेक्षा गर्नु केवल महत्त्वपूर्ण छ, र यसलाई अगाडि बढाउनको लागि तयार हुनुहोस्।
के तपाई नयाँ संस्कृतिमा अनुकूलन गर्न खुला हुनुहुन्छ?
तपाइँको नयाँ घरमा, सम्भावनाहरू चीजहरू काम गर्दैनन् जस्तो गरीन्छ तपाईले आउनु भएको ठाउँमा।
तपाइँ नयाँ संस्कृति अँगाल्ने र चीजहरू गरेको तरीकामा अनुकूलनका लागि खुला हुनु आवश्यक छ।
मेरो श्रीमान् अब मलाई माया गर्नुहुन्न
मैले यसो भनिरहेको छैन कि तपाईंले आचरण गर्ने र संचालन गर्ने तरिका पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ, तर तपाईंलाई सानो कुरा परिवर्तन गर्न खुला हुनु आवश्यक छ के अनुकूल छ के अनुकूल छ वा जीवन तपाईं कसरी रोज्नु भएको शहर वा देश मा संरचना छ।
२१. के तपाईं नयाँ साथीहरू बनाउन प्रयास गर्नुहुनेछ?
साथीहरू तपाईलाई आउन लागेका छैनन्।
साथी बनाउने कलामा तपाई धेरै अभ्यास गर्न सक्नुहुन्न यदि यदि तपाई कहिँ कहिँ नयाँ सर्नु भएको छैन भने, तर तपाईले त्यहाँ बाहिर जान र प्रयास गर्न तयार हुनु आवश्यक छ।
त्यो सामाजिक घटनाहरूमा जाने, कक्षा लिने, खेल खेल्ने…
तपाईंले आफूलाई मनपराउने व्यक्तिलाई मित्रताको प्रस्तावहरू बनाउन बाध्य पार्नु पर्छ जडान निर्माण गर्न प्रयास गर्नुहोस् ।
यस तथ्यलाई स्वीकार गर्नुहोस् कि धेरै जसो मानिसहरूसँग पहिले नै उनीहरूको जीवन र साथीहरू छन् र व्यस्त छन्, त्यसैले तपाईलाई एक बन्धन सिर्जना गर्न सोचेको भन्दा केहि बढी प्रयास गर्नु पर्ने हुन सक्छ।
२२. के तपाईका अपेक्षाहरू बढि हुन सक्छन्?
के तपाइँले यो जस्तो हुँदैछ भनेर अवास्तविक अपेक्षाहरू पाउनुभयो?
पक्कै पनि, तपाईं स्वर्गमा सर्दै हुन सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ अझै पछाडि प्याचहरू छन्।
चीजहरू गाह्रो हुने आशा गर्नु उत्तम हुन्छ, त्यसैले यदि यो सबै योजनाको लागि पूर्ण रूपमा जान्छ भने यो एक रमाइलो आश्चर्य हो।
२ permanent. यो स्थायी हो, वा समय अवधिको लागि हो?
तपाइँ months महिना को लागी जाँदै हुनुहुन्छ? एक वर्ष? तीन वर्ष? के तपाई, सबै ठीक छ, सदाका लागि रहन सक्नुहुन्छ?
के तपाईं अरू कतै सर्नुहुनेछ, वा तपाईं आफ्नो हालको घरमा सर्दै हुनुहुन्छ?
२ you. यदि तपाईंले यो गर्नुभएन भने, के तपाईं पछुताउनु हुन्छ?
यदि तपाईं उफ्रिने बिरूद्धको निर्णय गर्नुहुन्छ भने, यो केहि चीज हुनेछ जुन तपाईंको दिमागको पछाडि चिप्लन्छ?
दश बर्षमा, के तपाईंले यस अवसर लिनुभएन भने पछुताउनुहुनेछ?
के यो एक शट दिन र यो सबै अलग पन्छिन भन्दा राम्रो हुनेछ, कहिल्यै कोशिस नगर्न को लागी?
निश्चित छैन कसरी नयाँ जीवन सुरु गर्ने? आज एक जीवन कोचसँग कुरा गर्नुहोस् जो तपाईंलाई प्रक्रियामा हिंड्न सक्छ। केवल एक संग कनेक्ट गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईंको अज्ञातको डरलाई कसरी हटाउने
२ You गर्नुपर्ने कुराहरु जब तपाई घर एक्लै र कंटालु हुनुहुन्छ
तपाईको जीवनमा कति साथी चाहिन्छ?
यो किन महत्त्वपूर्ण छ तपाई एक समयमा एक दिन बाँच्नुहुन्छ (+ यो कसरी गर्ने)
एक केटी को लागी धेरै बलियो आउँदैछ
एक राम्रो साथी को गुण के हो
सबै भन्दा राम्रो तरीका कसैलाई बताउन को लागी तपाइँ उनीहरुलाई मनपराउनुहुन्छ
कसरी तपाइँको प्रेमी लाई झुट बोलेको माफी माग्ने
एक साथी द्वारा प्रयोग गरीरहेको संकेत
तपाइँ कसरी कसैको मायामा फिर्ता आउनुहुन्छ?